CPA VS. Chartered ego - Which Is Better? [It's A Close Call]
CPA vs ca (Chartered ego): Nke kaara unu mma?
23 Aug CPA vs ca (Chartered ego): Nke kaara unu mma?
Nke dị mma? Nke designation ga-enyere gị ọrụ? Mgbe ị na-ekpebi gị oke nke ọrụ na accountancy, i nwere ike na a nsogbu ịhọrọ CPA ma ọ bụ ca. The isi nke ajụjụ bụ ma CPA na-erite uru gị ọrụ ụzọ ma ọ bụ ca? E nweghị doro anya na-eto eto n'ihi na ma ruru eru ga-enyere na-eto gị oru nkà, accountancy nkà na azụmahịa management nkà. Ọzọkwa, CPA na ca ịgụ agbasaghị na-dokwara gbasaa gafee azụmahịa na ọha ajụjụ - mere na onye ọ bụla nzere enye kacha mgbanwe na-arụ ọrụ gafee ụlọ ọrụ. Ka anyị a anya na ihe ọ bụla nke ndị a certifications abuana na isi iche n'etiti abụọ.
Gịnị bụ a ca?
CPA vs ca: ọrụ Ụzọ
CPA vs ca: ụgwọ ọnwa
CPA vs ca: Oge chọrọ
CPA vs ca: Asambodo Akwụ ụgwọ na chọrọ
Ya mere, Nke kaara unu mma?
A Certified Public ego bụ a ọkachamara nwere gafere CPA udomo oro nyere site American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) na-emezu ihe niile nke muta na-arụ ọrụ ahụmahụ chọrọ metụtara na-ewere udomo oro. Ndị a ọkachamara na-ọkachamara na US GAAP, US gọọmenti etiti ego tax, na ọtụtụ ndị ọzọ ebe nke US aza ajụjụ na ego iwu ndị dị otú ahụ dị ka auditing. Ọ bụ ezie na nke a asambodo na-na-akwanyere ùgwù na gburugburu ụwa, ọ bụ a US designation Certifying na ọkachamara bụ eru na US aza ajụjụ na-enwe ike ịrụ auditing na ụtụ isi ihe aga-eme na ndị ọzọ ndị ọkachamara na-agaghị ekwe ime.
A Chartered ego (ca) bụ ọkachamara bụ onye gafere ca udomo oro na achọrọ mmụta na ya ma ọ bụ mba ya nke asambodo. E nwere ọtụtụ òtù ndị na-enye ọzụzụ na nnyocha maka CAS. A atụ ole na ole na-agụnye Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS), na Institute of Chartered Accountants na England na Wales (ICAEW), Institute of Chartered Accountants of India (Ichhai) na Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA.) Chartered Accountants na Canada, Australia, New Zealand, Mexico na Ireland nwere a reciprocity nkwekọrịta na United States. Ọ bụrụ na ha nwere ike gafee ihe equivalency udomo oro, ha nwere ike na-arụ ọrụ na U.S. dị ka CPAs. CAS bụ ọkachamara na IFRS ndị ọzọ na mba aza ajụjụ ụkpụrụ. Ezie na ha nwere ike na-enwe ezi ighota na US GAAP, ha na-adịghị dị ka a zụrụ azụ na mpaghara ebe a dị ka CPAs bụ.
The CPA designation ga-emeghe elu a ọtụtụ ọrụ nhọrọ maka gị. Mgbe na gị CPA asambodo i nwere ike na-arụ ọrụ n'okpuru dị iche iche ajụjụ ubi ndị dị otú ahụ dị ka International Accounting, esịtidem & mpụga auditing, na-agba izu Services, Forensic Accounting, nkwa ọrụ, Taxation & Financial Planning etc. Na ya zuru ụwa ọnụ ude, ị ga-ahụ ebe kasị mma na-arụ ọrụ n'ebe ọ bụla na ọtụtụ mba. N'otu aka ahụ, Ca aha ga-enye gị ọtụtụ nhọrọ na pụrụ iche ebe nke Accounting dị ka auditing, Taxation, ụlọọrụ Finance, ụlọọrụ Iwu. Mgbe na gị ca Asambodo ị nwere ike ma na-arụ ọrụ na ẹdude n'elu sịrị of Accountancy ma ọ bụ i nwere ike amalite gị onwe gị onwe ha ọkachamara omume.
Ma CPAs na CAS ụgwọ ọnwa-adabere na gị ebe, aha ọrụ, na afọ ahụmahụ. N'ihi ya, ha ịdị iche iche adi. The etiti ụgwọ maka a CPA na U.S. bụ $62,410 na etiti ụgwọ maka a ca na U.K. bụ £ 34.637 ($44,849 USD). Ma certifications nwere nnukwu ụgwọ elu agagharị na otú onye ọ bụla na-eme $150,000 ma ọ bụ karịa kwa afọ dabere na ọnọdụ na larịị nke ahụmahụ.
Ọ bụ obere ihe n'ụzọ kwụ ọtọ na-a CPA na okwu nke oge a chọrọ. Ị ga-dechara 150 Undergraduate n'aka awa na ị ga-arụ ọrụ a nyere ọtụtụ awa n'okpuru kpọmkwem nlekọta nke a CPA. Ị mgbe ahụ nwere 18 ọnwa nọdụ maka ma na-agafe niile anọ n'akụkụ nke CPA udomo oro. Ya mere, ọ nwere ike na-ewe banyere 8 1/2 afọ na-a CPA (afọ ise nke Undergraduate ọrụ, afọ abụọ na ọrụ na 18 ọnwa ruo CPA udomo oro). Ogologo oge ọ na-ewe iji na-a ca-adabere na ihe mba i na-eme atụmatụ na-eme na na gị larịị nke muta na ọkachamara ahụmahụ. Dị ka ihe atụ, ndị ICAS nwere anọ nhọrọ:
Direct ntinye ụzọ maka akwụkwọ-leavers, nke na-achọ afọ ise nke ọzụzụ na ihe ICAS-mma na-arụrụ ọrụ;
Ukpep ntinye ụzọ maka akwụkwọ na mahadum, nke na-achọ afọ atọ nke ọzụzụ na-ICAS-mma na-arụrụ ọrụ;
Professional ntinye ụzọ maka nwetara ego ọkachamara bụ maka ike ọkachamara na a mahadum ogo (chie ghọtara dị ka a UK Ẹkot) ma ọ bụ afọ ise nke mkpa na-arụ ọrụ ahụmahụ na
The ụzọ ụzọ na-enye ohere òtù The Chartered Institute of Public Finance na Accountancy (CIPFA) ohere ịghọ a so ICAS na irite ca designation.
E nwere ihe abụọ ụzọ; otu jikoro mkpa nka na ndị ọzọ, bara amaka. Ma ụzọ na-achọ afọ asaa nke post-nzere ahụmahụ. The kasị mma "apụl na-apụl" tụnyere ga-CPA = ICAS ụzọ #2.
Ole ọ na-efu iji nweta gị CPA ikike bụ agbanwe. All na-ekwu, na-achọ ka ị na-akpata a kacha nta nke a okokporo ogo na-aza ajụjụ ma ọ bụ azụmahịa na gụnyere a ọnụ ọgụgụ nke chọrọ ọmụmụ. Fọrọ nke nta niile na-ekwu na-achọ ka ị na-akpata dịkarịa ala 150 kaadị awa nakwa. N'ihi ya, gị CPA izi-achọ ga-iche iche dabere ma ọ bụrụ na ị na-achụso a eteufọk ogo irite ikpeazụ gị 25 na mahadum n'aka awa ma ọ bụ nanị ewe ihe ọmụmụ gị Undergraduate ogo omume. The asambodo usoro onwe ya ga-eri ihe $3,000 tinyere a kwesịrị ekwesị CPA review N'ezie na udomo oro ụgwọ. Mgbe ị na-agafe udomo oro, ị ga-mkpa ka ị na-ikike nti na nọgidere na-akụziri Ebe e si nweta onye ọ bụla n'afọ. Ndị a ịdị iche na price ma ọtụtụ na-eri n'etiti $50-$100 kwa n'aka hour. Ọtụtụ na-ekwu, na-achọ gburugburu 40 Ebe e si nweta kwa afọ. Echegbula ezie. Ọ bụrụ na ị na-a ọrụ na a ọha ajụjụ ike, ha ga-akwụ gị nọgidere na-akụziri.
The na-eri n'ihi na-aghọ a ca na-adabere na mba ị na-ebi, gị mmụta na-arụ ọrụ ahụmahụ na ihe nzukọ ị na-itinye na maka inweta gị nzere.
Ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na ị na-itinye na ICAS na ị na-ahọrọ ụzọ ndụ ndị #1 na #2 (kpọmkwem ntinye akwụkwọ ma ọ bụ mahadum) mgbe ahụ, gị na-arụrụ ọrụ ga-ekpuchi na-akwụ ụgwọ. Ọ bụrụ na ị na-ahọrọ ụzọ #3 (ahụmahụ Professional), na-akwụ ụgwọ ndị Olee ihe enyemaka £ 5,750 - £ 13.900. ụzọ #4 (maka CIPFA òtù) akwụ ụgwọ ndị £ 1.035 maka Bara Uru nka ụzọ. Maka Uru amaka ụzọ, na-akwụ ụgwọ ndị: £ 596 maka ọzụzụ nkwekọrịta; £ 1.547 - £ 1.935 maka klas ụgwọ; £ 292 nke udomo oro ego na £ 495 maka kwa afọ ICAS / CIPFA otu dues. Ọ bụrụ na e nwere nọgidere na-akụziri na ikikere chọrọ, ha ga-ekpebisi ike site na mba na nke ị na-arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na-arụ ọrụ ná mba ọzọ ma ọ bụ na a si ọtụtụ mba ụlọ ọrụ, mgbe ahụ i kwesịrị-ahọrọ CPA. Ị pụrụ ịmụta ihe banyere kacha mma CPA Prep ọmụmụ Ebe a. Nhọrọ, ma ọ bụrụ na ị na-achọ na-amalite na gị onwe gị oditi omume na India, ahọrọ ca. Ọzọkwa, na ca udomo oro bụ obere oké ọnụ ka tụnyere ndị CPA ule. Ma otu n'ime ndị a certifications dị mma karịa ndị ọzọ. Ha bụ nanị dị iche iche na-eji dị iche iche na nzube. I nwere ike na-atụ anya ka banyere otu ụgwọ na ma nzere nyere na ebe, ọrụ ọnọdụ, ụlọ ọrụ, na-arụ ọrụ ahụmahụ bụ otu. Ọ n'ezie abịa ala ihe ị chọrọ ime na ebe ị chọrọ ka na-arụ ọrụ. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
CPA, Roger CPA Review, nanị Discount, Deep Discount 33 eji taa
CPA, Surgent CPA Review, nanị Discount 35 eji taa
ikpeazụ eji 1 awa gara aga
ikpeazụ eji 1 nkeji gara aga
CPA, Surgent CPA Review, nanị Discount 33 eji taa
CPA, Wiley CPAexcel, Special Nye 40 eji taa
CPA, Roger CPA Review, nanị Discount 41 eji taa
CPA, Surgent CPA Review, Deep Discount 41 eji taa
CPA, nanị Discount, Fast Forward Academy 37 eji taa
CPA, Special Nye, Crush The CPA 33 eji taa
CPA, Roger CPA Review, Deep Discount 41 eji taa
CPA, Roger CPA Review, Deep Discount 39 eji taa
CPA, Roger CPA Review, Deep Discount 36 eji taa
CPA, Yaeger CPA Review, nanị Discount 38 eji taa
CPA, Surgent CPA Review, Webinar 37 eji taa
CPA, Roger CPA Review, Financing Nye 38 eji taa
CPA 37 eji taa
CPA, Surgent CPA Review, Free Trial 41 eji taa
CPA, Roger CPA Review, ọzọ 35 eji taa
CPA, Wiley CPAexcel, ọzọ 41 eji taa